Izibonelelo zeRente yokuqeshisa vs Ukuba ngumnikazi weKhaya- iBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW
EyoKwindla 05, 2020 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
okwenyaniWW Matshi 5, 2020
Olu ngeno yafakwa kwi Imali yezezindlu noqhotyosho Ukuqeshisa vs Ubunini. Bookmark le Permalink.
Julayi 12, 2016 Imibuzo emihlanu esisiseko ekufuneka uzibuze yona phambi kokuboleka ikhaya lamaphupha akho Akukho nto inomvuzo ngaphezu kokuba nekhaya lakho. Indawo yethu yokusabela izisa loo mvakalelo yenkululeko, ukuba yeyakho, kunye negunya eliqeshise amagumbi, nokuba likhulu kangakanani, alinakunika. Ngenxa yezisombululo ezingapheliyo zokubolekwa kwemali ezifumanekayo namhlanje njengemali mboleko yokubolekwa kwempahla, awunyanzelekanga ukuba ube nomsebenzi ohlawula kakhulu ukuze ubaleke kumjikelo obambekayo wokuqesha kwaye ube nekhaya lakho. Ngokucacileyo, imali mboleko yemali mboleko yimali mboleko efunyenwe […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Matshi 28, 2018 Izindlu ezihlanganisiweyo zeNtengiso yeZindlu Indibaniselwano yokuthengiswa kwezindlu nomhlaba ibeka iintloko ezininzi kubantu abaphezulu kwintsebenziswano, kwaye baya kuhlala bebanga ukuba banomsebenzi omnye onqabileyo kwishishini. Oku akumangalisi kuba ngumsebenzi wabo wokuqinisekisa ukuba bayazifezekisa izicwangciso, ezemali kunye nolindelo lomsebenzi wabo banenxaxheba kuzo. Ulungiselelo lolawulo lwendibaniselwano inokuba nzima kakhulu kuba igunya kufuneka linikezelwe kumacala omabini endibaniselwano, kodwa ngesiqhelo, […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Oktobha 10, 2016 Iimpawu ezi-5 eziqhelekileyo zokubukela ngeli xesha lerhafu Ixesha lerhafu likwathetha nexesha lamagcisa e-scam erhafu angakwaziyo ukulinda izandla zawo zimdaka kwimbuyekezo yakho yerhafu. Yiba sisilumko kwaye ungavumeli imali yakho oyisebenzele nzima ibiwe ngabavavuli nabaqambi. Aba bantu banobuchule kakhulu kwinto abayenzayo-ukweba imali yabanye abantu ngeendlela ezahlukileyo obungayi kucinga ukuba ukrokrela ekuqaleni. Khusela imali yakho; Ngena nolwazi malunga ne-scams zakutshanje zerhafu kunye neendlela zokuyiphepha. Ubunikazi besazisi Esi [] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Julayi 3, 2019 Kutheni ukurentisa Kungcono kunokuThenga iKhaya Kutheni ukurentisa kunokuba kubhetele kunokuThenga iKhaya lakho elilandelayo: Iingcebiso ezininzi ezilapha phandle zicebisa ngokungqeshisa ngokurentisa ikhaya lakho. Nangona kunjalo, ukuthenga kusenokungabi lolukrelekrele, nolunokwenyani uhlobo lomntu ngamnye. Kwimarike yanamhlanje yokuthenga, ukuthenga indlu kuza namaxabiso anyukayo ngokukhawuleza, kunye nexabiso eliphakamileyo lokuthenga izindlu, nto leyo ebangela ukuba kubelula ukurenta indlu. Ukurenta kunokubonakalisa uxinzelelo oluncinci xa kuziwa kulondolozo, izibonelelo, ukhuseleko kunye nokonga imali. Zininzi izizathu zokuba […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
January 5, 2017 Imali kunye neMarike yeZindlu yase-UK ngo-2017 NgoJanuwari, yinto yemvelo ukuba abantu bajonge phambili kunyaka ongaphambili kwaye bazame kwaye babone ukuba yeyiphi imeko abaza kuba nayo. Kunzima ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba kuzakwenzeka ntoni, kwaye zininzi izinto ezizezakho ezinokubakho yenzeka okuthetha ukuba umntu uchaphazelekile ngeendlela imakethi ayinakho ukuxela kwangaphambili kodwa zikhona iimeko ezijongeka ngathi zichaphazela yonke imarike. Ngeli xesha lonyaka, ingcebiso kunye nesikhokelo seengcali, xa kuziwa kwezemali, […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Matshi 31, 2017 Iimpawu ezenza iRhafu yePropathi oyihlawula Njengoko igama layo lisitsho, irhafu yepropathi luhlobo lwerhafu evavanyiweyo kwipropathi yendawo ethengisa izindlu ngalo lonke ixesha isekwe kwixabiso lepropathi yakho. Nangona ibill ibonakala isengqiqweni kwiimeko ezininzi, kubalulekile ukuba wazi ukuba zibalwa njani iirhafu zakho kwaye uqiniseke ukuba awuzibi ngaphezulu. Funda ukuze wazi izinto ezinegalelo kwirhafu yakho yepropathi. Ixabiso elivavanyiweyo lePropathi yokuRhafiswa kweRhafu yePropathi ngokufuthi isuselwa kwixabiso lomhlaba, apho ixabiso liphezulu, […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Septemba 29, 2017 Iimpazamo ezi-7 zokuThengisa iKhaya eliQhelekileyo ukuthintela Nangona abathengi kude nonxweme behlaselwa yirhafu yezithuba kunye nezinye izithintelo, bayaqhubeka nokuhlasela ilizwe lase-Australia. Ke ukuba unethemba lokuthenga ikhaya lakho lamaphupha okanye ipropathi yotyalo mali, kufuneka uyazi indlela yokuhamba indlela yakho kwintengiso yokuthengisa okanye ukuphepha iimpazamo ezinokubangela iindleko. Nazi iimpazamo ezisi-7 ofanele uziThintele uku-1. Ukungafumani mvume yangaphambili yokubolekwa kwemali yekhaya yintengiso yepropathi ekhuphisanayo ukuba kuya kufuneka […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ishishini lokuthengisa izindlu
Juni 24, 2019 Iindleko zeInshurensi yasekhaya ezinokubiza kakhulu Kuyonwabisa ukuya kwikhaya elitsha, kodwa ungalibali ukuba ukuzingela indlu ayisiyonto imnandi kunye nemidlalo. Kuya kufuneka ukhe uziqhawule ngalo lonke uxanduva oluzayo ngokuthenga ikhaya, njengokufumana ipolisi yeinshurensi yendlu yakho entsha. Njengesikhumbuzo esiluncedo, nazi iimpazamo zeinshurensi yasekhaya ekufuneka uyiphephe, ngakumbi ukuba ungumnini khaya. 1. Ukuseta uhlahlo-lwabiwo mali olungenangqondo Kulula ukubanjwa kulo lonke uluhlu oluhle kakhulu xa uxakekile […] exhonyiweyo Imali yezezindlu